हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् - Medical Aid International
प्रभावकारी रिसाइक्लि saving जीवन बचाउने
हामी वास्तवमै तपाईलाई यो पढिरहेकोमा खुशी छौं, किनकी आशा छ यसको मतलब तपाईसँग केही दान दिन हामीसँग केही उपकरणहरू हुन सक्छन! यद्यपि कहिलेकाँही हामीलाई आईटमहरू पठाइन्छ जुन कुनै कामका छैनन् र यसले हामीलाई डिस्पोजल गर्न खर्च गर्दछ, त्यसैले हामी तपाईंको लागि केहि दिशानिर्देशहरू तल सेट गरेका छौं।
विकासोन्मुख संसारमा अपरेटिंग थिएटर, अस्पताल र क्लिनिकहरू डिजाईन र सुसज्जित गर्न हामीसँग धेरै वर्षको विशेषज्ञता छ। हामी उपकरणहरू आपूर्ति गर्दछौं जुन यसको प्रस and्ग र यसको कार्यको लागि उपयुक्त छ, जस्तै। शुद्ध भोल्टेजेस, तातो र आर्द्रता प्रतिरोधी, मजबूत, ब्याट्री ब्याक-अप जहाँ पनि सम्भव छ, नवजातहरू र बाल-देखभालको लागि सुसज्जित र एकल प्रयोग सामानहरूको उन्मूलन। यसले उत्तम अभ्यासलाई बढवा दिन्छ र खराब र बिच्छेदहरूलाई कम गर्दछ।
हामी शल्य स्रोतको उपयोग गरेर सबै प्रकारका शल्य उपकरण र उपकरणमा उत्कृष्ट मूल्य प्रदान गर्दछौं। हाम्रो उद्योग साझेदारहरूको व्यापक नेटवर्क को माध्यम बाट, हामी प्रतिस्पर्धी मूल्य नयाँ उपकरणहरू प्रदान गर्न सक्दछौं, साथै पूर्व-डेमो र पुनर्चक्रित उपकरणहरूको साथ।
हामी बेलायतमा प्रि-स्वामित्वका उपकरणहरू आपूर्ति गर्न विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूसँग काम गर्दछौं। सबै पूर्व-स्वामित्व उपकरणहरू पूर्ण रूपमा सेवा गरिएको छ र पठाइनु अघि हाम्रो बायोमेडिकल ईन्जिनियरि team टीमले तयार गर्दछ, र अतिरिक्त र म्यानुअलहरू द्वारा आपूर्ति गरिन्छ।
के तपाईंसँग कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजेट छ? यदि हो भने हामीसँग कुरा गर्नुहोस् किनकि हामीसँग धेरै परियोजनाहरू छन् जसलाई तपाईंले समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ
हाम्रो दान दिशानिर्देशहरू तलको बटनमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस्।
हामी उनीहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थामा उनीहरूको प्रभावलाई अधिकतम बनाउन बजेट तन्काउनका लागि विशेषज्ञ छौं। हामी यो नयाँ, पूर्व प्रदर्शन, पूर्व-स्वामित्व उपकरण र कहिले काँही उपभोज्य आपूर्तिका प्रयोग गरेर गर्छौं।
यो महत्वपूर्ण छ कि हामीले पठाएका सबै उपकरणहरू वातावरणका लागि उपयुक्त छन् कि यो लिइदै छ मध्यम र कम्तीमा आय आय देशहरूमा स्वास्थ्य सेवाको लागि दीर्घकालीन र दिगो फरक गर्न।
हामी सँधै यसको लागि ध्यान दिन्छौं:
कचौरा, कचौरा स्ट्यान्ड्स, किडनी डिश नेतृत्व aprons अर्थोपेडिक शक्ति उपकरणहरू
Crutches म्यानुअल परीक्षा पल्टन बिरामी ट्रालीहरू
Defibrillators म्यानुअल अपरेटिंग टेबल र एट्याच्मेन्टहरू फिजियोथेरापी उपकरण
डायथर्मी माइक्रोस्कोपहरू पुन: प्रयोज्य laryngoscopes
आपतकालीन उपकरण सानो प्रक्रिया तालिका पुन: प्रयोज्य laryngoscopes
परीक्षा र मोबाइल र छत अपरेटिंग लाइट (LED) मोबाइल एक्स-रे मेशिनहरू पानाहरू / कम्बलहरू
जीपी सर्जरी उपकरण मोनिटर सक्सन
Gynae / प्रसूति परीक्षा तालिका नर्सिंग आईटमहरू प्रशिक्षण manikins को रूप मा
छवि विस्तार व्यावसायिक चिकित्सा उपकरण अल्ट्रासाउन्डहरू
उपकरणहरू अपरेटिंग थिएटर फर्नीचर वार्ड फर्नीचर
IV स्टैंड आर्थोपेडिक प्लेटहरू / स्क्रू / बाह्य निर्धारण एक्स-रे निहित
कृपया नोट गर्नुहोस् कि हामी निम्न लिन सक्दैनौं:
मिति बाहिरको वस्तुहरू
एकल प्रयोग वस्तुहरू (IE AMBU ब्यागहरू, एकल प्रयोग laryngoscopes, syringes, IV cannula)
अर्थोपेडिक जुत्ता, कोष्ठकहरू
क्याथेटरहरू, ड्रेसिंगहरू, कोलोस्टोमी ब्यागहरू
सामान्यतया, हामी उपभोग्य वस्तुहरू लिदैनौं यद्यपि त्यहाँ अपवादहरू छन् यस्तै sutures र एनेस्थेटिक सास फेर्ने सहायकहरू, तिनीहरू लामो सम्म मितिमा छन्।
यदि तपाईं एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता हुनुहुन्छ निपटानको लागि धेरै उच्च स्तरको स्टकको साथ कृपया सम्पर्कमा रहनुहोस्।